के हो प्यासेन्ट जिरो? कोरोनाको प्यासेन्ट जिरो को?
एजेन्सी आइतबार, चैत ९, २०७६, १४:४८
एजेन्‍सी- कोरोना भाइरसको उत्पत्तिका विषयमा चिनियाँ प्रशासन र विशेषज्ञहरूबीच मतभेद जारी छ। यो भाइरसको पहिलो संक्रमितका विषयमा उनीहरूबीच मतैक्यता छैन।
कुनै पनि रोगको पहिलो बिरामीलाई ‘प्यासेन्ट जिरो’ अथवा ‘इन्डेक्स केस’का रूपमा लिइन्छ। तर‚ यही विषयमा उनीहरूबीच मतभेद भएको हो। यसको संक्रमण कहाँबाट सुरु भयो भन्ने निर्क्यौल छैन भने मतभेद जारी छ।
कोरोना भाइरसको पहिलो संक्रमित व्यक्तिका बारेमा हामीलाई थाहा छ त? यसको सिधा उत्तर हुन्छ ‘थाहा छैन’।
कोरोना भाइरसको पहिलो घटना
गत डिसेम्बर ३१ मा चीनको वुहान सहरबाट यसको संक्रमण देखिन थालेको चिनियाँ प्रशासनले बताएको थियो। यो भाइरस हुवेइ प्रान्तको वुहान सहरको एक ‘सी-फुड मार्केट’सँग सम्बन्धित रहेको बताइएको थियो।
यो भाइरसको संक्रमण फैलन सुरु गरेपछि चिनियाँ सरकारले तुरुन्त वुहानमा रहेको उक्त बजारलाई बन्द (लकडाउन) गरिदिएको थियो।
ल्यानसेट मेडिकल जर्नलमा चिनियाँ शोधकर्ताद्वारा प्रकाशित एक शोधका अनुसार कोरोना भाइरसबाट संक्रमण हुने रोग कोभिड-१९ बाट संक्रमित बिरामी गत डिसेम्बर १ मै अस्पतालमा दर्ता भएको जनाइएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि कोरोना महामारीको सुरुवातमा गरिएको आशङ्का नै अहिलेसम्मकै प्रबल भएको र जनावरबाटै उक्त संक्रमण फैलिएको हुन सक्ने दाबी पनि छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार पश्चिमी अफ्रिकामा सन् २०१४ देखि २०१६ सम्म फैलिएको इबोला भाइरस सबैभन्दा छिटो फैलिएको भाइरस हो। यो भाइरसबाट ११ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको थियो भने २८ हजारभन्दा बढी मानिस यसबाट संक्रमित भएका थिए।
यो संक्रमणलाई जन्म दिने भाइरसको बारेमा प्रथम पटक १९७६ मा पत्ता लागेको थियो। इबोला भाइरसको संक्रमण दुई वर्षसम्म देखिएको थियो। इबोलाको संक्रमण जम्मा १० देशमा पाइएको थियो‚ जसमध्ये सबैभन्दा बढी संक्रमित अफ्रिकामा भएका थिए।
इबोला भाइरसको संक्रमण गिनीका दुई वर्षीय बालकबाट फैलिएको भनी वैज्ञानिकहरुले निष्कर्ष निकालेका थिए। सो भाइरस चमेरोबाट सरेको मानिएको थियो।
तर‚ इबोला प्रकोपको स्रोतबारे आफ्नो रिपोर्ट प्रकाशित गर्नुअघि वैज्ञानिकहरू उक्त ती बालकको गाउँ गएका थिए‚ ताकी इबोला संक्रमणबारे थप जानकारी पत्ता लगाउन सकियोस्।
संक्रमणको प्रकोप फैलिएका बेला ‘प्यासेन्ट जिरो’ पत्ता लगाउनु अध्ययनका लागि महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। ‘प्यासेन्ट जिरो’ भनी मेरी मेलनलाई चिनिन्छ। जसलाई 'टाइफाइड मेरी' पनि भन्ने गरिन्थ्यो। प्यासेन्ट जिरो भनेको कुनै पनि संक्रमणको पहिलो संक्रमित व्यक्ति हो भन्ने विषय त माथि नै पनि आइसकेको छ।
न्यूयोर्कमा सन् १९०६ मा भएको एक प्रकोपको सुरुवात मेलनबाटै भएको थियो। उनी आयरल्यान्डबाट अमेरिका आएर न्यूयोर्ककै धनी परिवारका लागि खाना पकाउने काम गर्थिन्।
उनी जहाँ-जहाँ काम गर्थिन्‚ त्यहाँ-त्यहाँका सबै परिवारका सदस्यलाई टाइफाइडको संक्रमण भएको पाइएको थियो।
प्यासेन्ट जिरो शब्दसँगै यसमा मानिसहरूले भेदभाव पनि झल्कने गरेको देखेका छन्। यसबाट प्यासेन्ट जिरोमा पर्न सक्ने नकारात्मक असरको बारेमा कतिपयले खुलेर बोलेका छन्।
एकपटक गिटेन डुगास‚ क्यानडाका समलैङ्गिक क्रू मेम्बरले शायद इतिहासमै सबैभन्दा बढी घृणित हुनुपर्‍यो। किनकी, उनलाई सन् १९८० को दशकमा अमेरिकामा एचआइभी संक्रमण फैलाउने व्यक्ति भनी लान्छना लगाइयो।
तर‚ त्यसको ३० वर्षपछि वैज्ञानिकहरूको अध्ययनबाट उनी त्यो एचआइभीको संक्रमण फैलाउने व्यक्ति नभएको पुष्टि भएको थियो। सन् २०१६ मा गरिएको एक शोधअनुसार भाइरस सन् १९७० को दशकको सूरूमा केरेबियाई क्षेत्रबाट अमेरिकामा फैलिसकेको थियो। प्यासेन्ट जिरो शब्दको गलत प्रयोग त्यहीँबाट हुन थालेको थियो।
लस एन्जलस र सन फ्रान्सिस्कोमा सन् १९८० को दशकमा एड्स फैलनुको कारणबारे परीक्षण गरिरहेका सेन्टर फर डिजिज् कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनका शोधकर्ताले क्यालिफोर्निया राज्यभन्दा बाहिरका कुनै पनि राज्यलाई संकेत गर्न अंग्रेजी अल्फाबेट ‘ओ’को प्रयोग गरेका थिए। तर‚ अन्य शोधकर्ताले यसको गलत प्रयोग गर्दै ‘जिरो’ भनी प्रयोग गर्न थाले। यसरी 'प्यासेन्ट जिरो' भन्ने शब्द प्रचलित भएको थियो।
यो वर्ष आउन सक्छ चीनबाट भ्याक्सिन
नेकपामा एमसिसी पेचिलो बन्दै आइतबार, जेठ १८, २०७७
कहाँकहाँ चुक्यो बजेट? आइतबार, जेठ १८, २०७७
बजेटलाई विवाद रहित ढंगले स्विकार्नुपर्छ: श्रेष्ठ आइतबार, जेठ १८, २०७७